Emirates Airline banks on Venice and Milan after India flights suspension puts EK in crisis | Aviation News
Ikhaya » Iindaba zeAnga » Iibhanki zeenqwelo moya zase-Emirates eVenice naseMilan emva kokumiswa kweenqwelo moya eIndiya kubeka i-EK kwingxaki
Iibhanki zeenqwelo moya zase-Emirates eVenice naseMilan emva kokumiswa kweenqwelo moya eIndiya kubeka i-EK kwingxaki
Ngamahemuhemu abonisa ukuba i-Emirates ikwimeko enzima yemali ngeenqwelomoya ezinqunyanyisiweyo zaseIndiya kwaye inokuba icele urhulumente wase-UAE ukuba ancede, indlela yokusinda ayizosika iindlela, kodwa kukwandiswa. USheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, u-CEO we-Emirates ubeka ingqwalaselo entsha e-Italiya ekwakheni iinqwelomoya ezintsha ezisuka eDubai zisiya eVenice naseMilan, phakathi kwezinye iimarike eziza kubhengezwa.
I-Emirates emanzini amdaka ngaphezulu kweenqwelo moya ezinqunyanyisiweyo ukuya eIndiya, eyona ntengiso iphambili kunye nentengiso yokuhamba yenethiwekhi esekwe eDubai. I-airline inokuthi icinge ukuba i-bailouts kaRhulumente iyona ngxelo.
I-Emirates iya kuphinda iqale iinqwelomoya phakathi kweDubai neVenice ukusuka nge-1 Julayi
Ngokwe-HRH U-Ahmed bin Saeed Al Maktoum, CEO ye-Emirates, ezi moya ziya kwandisa urhwebo kunye nokunxibelelana kwezokhenketho phakathi kwe-UAE ne-Itali.
Iinqwelomoya ziya kwandisa iinkonzo eMilan ukusuka kwi-8 ukuya kwi-10 yeenqwelo moya ngeveki ngoJulayi. Oku kuya kubandakanya inkonzo yemihla ngemihla kwindlela ye-JFK eDubai-Milan-New York, kunye ne-3-ngeveki yokubuya kweenqwelo moya phakathi kweDubai neMilan. Ngokudibana neenqwelomoya ezi-5 ngeveki zokuya eRoma kunye neenqwelomoya ezi-3 ngeveki ukuya eBologna, oku kuyakuthatha iinkonzo zenqwelomoya yenqwelomoya eya e-Itali ukuya kwi-21 yenqwelo moya yeveki nganye ukuya kwizixeko ezi-4 ngoJulayi. I-Emirates izakusebenzela iVenice, iMilan, iRoma kunye neBologna ngeenqwelomoya zayo zangoku kunye nezikhululekileyo zeBoeing 777-300ER.
Ukwandiswa kwe-Emirates yeenkonzo zenqwelomoya e-Italiya kulandela ukuqala kwe "Ukuvavanywa kwendiza evavanyiweyo"amalungiselelo, avumela abakhweli ukuba bahambe baye e-Italiya ngaphandle kokuvalelwa ekufikeni kwabo.
Ukuphakama kwakhe uSheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, uSihlalo we-Emirates kunye noMlawuli oyiNtloko wathi: “Samkela amalungiselelo eenqwelo-moya ezivavanyiweyo kwaye sithanda ukubulela abasemagunyeni base-Italiya nase-UAE ngemizamo yabo eqhubekayo yokwenza lula nokwenza lula uhambo lwamazwe aphesheya. I-UAE inobudlelwane obomeleleyo kunye nobude kunye ne-Italiya kunye nokubuya okukhuselekileyo kokunxibelelana komoya kuya kunceda ukukhulisa urhwebo kunye nokhenketho. Njengendawo yokurhweba kwihlabathi liphela, kunye nekhaya labantu abavela ngaphezulu kwamazwe angama-200, iDubai kunye ne-UAE azigcinanga nzame zokugcina uluntu lukhuselekile kubhubhane-ukusuka kwinkqubo yethu yokukhokela ekhokelela kwihlabathi kwiinkqubo zethu zokukhusela i-bio kuwo onke amacandelo kubandakanya nolonwabo kunye neendawo zokuzonwabisa, ezikolweni, kumashishini nakwizikhululo zeenqwelo moya. Siyathemba ukuba amazwe amaninzi azakuthathela ingqalelo amalungiselelo afanayo ukulungiselela ukuhamba kwabantu ngaphandle kwezithuthi. ”
Ukuqala kwe-2 kaJuni, abathengi be-Emirates abaya e-Italiya abaneminyaka emi-2 nangaphezulu, bayacelwa ukuba babambe i-COVID-19 PCR-RT okanye iziphumo zovavanyo ezikhawulezayo ze-Antigen ezifanelekileyo iiyure ezingama-48 ngaphambi kokuhamba. Abahambi kufuneka bathathe uvavanyo olukhawulezayo lwe-swab yokufika e-Itali, ngeendleko zabo. Ngolwazi oluthe kratya malunga neemfuno zokungena e-Itali, abathengi banokujonga i iimfuno zohambo iphepha kwi-mirates.com.
Ngonxibelelwano olulahlekileyo phakathi kweDubai kunye needolophu ezininzi zaseIndiya, i-Emirates ikwisimo esinzima ngohambo olulahlekileyo lokuhamba. I-India iye yahlaselwa sisifo esosulelayo se-COVID-19, ekhuthaza i-Emirates ukuba imise ukusebenza kweli lizwe labantu abangaphezulu kwe-1 yezigidigidi kude kube nge-30 kaJuni.
I-Emirates ihlala ijolise ekuthatheni amanyathelo ngeendlela zokunciphisa uhambo kwaye ibiyinkokeli yokwazisa amanyathelo ngokusebenzisana nabasemagunyeni kwezempilo kunye nemibutho ukukhusela impilo yabathengi kunye nokuqinisekisa ukhuseleko lwabo. I-Emirates yazisa amanyathelo emhlabeni kuyo yonke indawo yokuchukumisa kunye ebhodini ukubonelela abakhweli bayo ngemigangatho ephezulu yezokhuseleko kunye nococeko kuwo onke amanyathelo ohambo. I-airline iye yazisa kwakhona kutshanje Itekhnoloji engenakunxibelelanaukwenza lula uhambo lwabathengi kwisikhululo seenqwelomoya saseDubai.
Ukwazi ukhuseleko lwabo kunye nokuba sempilweni kujongiwe, abathengi kuzo zonke iiklasi banokonwabela ngaphezulu kwamajelo ama-4,500 okuzonwabisa iqhwa, inkqubo yohambo lwenkxaso mali yenqwelomoya, kunye nokutya okuphefumlelweyo kwengingqi.
I-Emirates iyaqhubeka ukukhokela ishishini ngeemveliso ezintsha kunye neenkonzo ezijongana neemfuno zabahambi ngexesha elinamandla. Kutshanje inqwelomoya yenze amanyathelo okhathalelo lwabathengi nemigaqo-nkqubo yokubhukisha enesisa nangakumbi, ulwandiso lwayo inshorensi yobungozi obuninzi, kunye nokunceda abathengi abathembekileyo Ukugcina iimayile zabo kunye nenqanaba lokuma.